1. दुबै मिठो र मीठो स्वाद दिन्छ तिनीहरूलाई सिग्नेचररी डिशमा बनाउन सकिन्छ जुन सबैलाई मनपर्दछ, जस्तै स्पेगेटी, सलाद, वा हार्दिक ब्रेकफास्टको रूपमा। विशेष गरी बर्षको अन्त्यमा जो घरमा एक पार्टी को लागी जाँदैछन् आज हामीसँग चुलो, स्वादिलो र सुगन्धित तीन घर, आठ घरहरूमा ओभनको प्रयोग गरेर बेकन बनाउने एउटा विधि छ। प्रोटिन र फ्याटमा भरिएको मेनूको साथ चिसो मौसमको मजा लिनको लागि केवल साधारण ओभन प्रयोग गर्नुहोस् मुख्य पाठ्यक्रमको साथ खाना वा सामग्रीहरू प्राप्त गर्न।
2. बेकन भनेको के हो? धेरै व्यक्तिलाई अझै थाहा छैन !! किनकि बेकन सुँगुरको पेटबाट बनिएको हो तर यो नुनिलोपना पछि समयावधि थपियो। कल गरीएको छ वा लामो खाना खान जारी राख्न खाद्य संरक्षणमा थपियो। केवल पानी, नुन, चिनी, सोडियम नाइट्राइट र सोडियम एस्कॉर्बेट सुगन्धित मासुको उत्पादनमा प्रयोग हुने मुख्य संरक्षण प्रक्रियाहरू हुन्। तापक्रम नियन्त्रण गर्नुहोस् र यो नभएसम्म छोड्नुहोस् बेकिंग बेकनका लागि प्रयोग गरिएको उपकरण • उच्च गुणस्तर बेकन heat गर्मी प्रतिरोधी बेक्ड बेकनको लागि प्लेट • ओभन
3. बेकन स्लाइसहरू प्लेट वा बेकिंग ट्रेमा राख्नुहोस्। बेकनको पछाडि खोलेर ताकि मासु फोल्ड वा अर्को टुक्राको साथ आवरण हुन्छ प्लेट भर गर्मी प्राप्त गर्न खाना पकाउन प्रयोग हुने एल्युमिनियम फोइलको शीर्षमा राख्न सकिन्छ। सजिलो सफाईको लागि
4. Prepared ओभनमा तयार गरिएको बेकन प्लेट राख्नुहोस्। त्यसपछि २० 205मा तापक्रम सेट गर्नुहोस्। पहिलो बेकमा १२-१-15 मिनेट बेकन बेक गर्नुहोस्। the बेकनलाई अर्को तर्फ फेर्नुहोस्। त्यसपछि सोही अवधि को लागि ओभनमा राख्नुहोस्
5. सफा, सुन्दर, प्लेट मिलाउन बाहिर निकाल्नुहोस्
6. ओभनमा राम्रोसँग र सजिलैसँग बेकन प्रयोग गर्ने एक स्वादिष्ट मेनू खाली नुमाइलोको रूपमा खान सकिन्छ किनभने यसको नुन, तेल, थोरै मीठो स्वाद र धुवाँबाट काठको गन्ध आउँछ। यो एक गम्भीर क्षुधावर्धक हो। तिनीहरूले यसलाई रोटी, चीज र तरकारीहरूमा राख्छन् जुन उनीहरू मन पराउँछन् भानविच बेकन जुन बच्चाहरूले कहिल्यै बिर्सदैनन्। यसलाई तरकारी सलादमा राख्नुहोस् र चीज थप्नुहोस्, यो सिजर सलाद हो, यो एउटा डिश जुन तपाईंको मनमा स्वादिष्ट हुन्छ। स्पगेटी कार्बोना छर्कनुहोस् यसले सबैको मन पर्ने खानाको स्वाद अझ बढी कोमलता थप्दछ। यद्यपि, बेकन एक उच्च फ्याटयुक्त खाना हो। ठिक्क मात्रामा खाना शरीरको लागि लाभदायक छ। तर धेरै खाँदै पक्कै नकरात्मक प्रभाव हुन्छ हामी स्वादिष्ट पकवान बनाउँछौं बान्कीको वर्षमा, साधारण ओभन-बेक्ड बेकन विधिबाट, गन्धको सुगन्ध फैलिन्छ, गर्मी र छुट्टीको सम्झनाहरू थप गर्दछ।